HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraTaariikhda Wadista Imtixaanka ee Ankara Sivas YHT Line Go'aamisay
13 / 01 / 2020 06 Ankara, 58 Sivas, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY, VIDEO
ankara sivas yht line taariiqda tijaabada ayaa la shaaciyey
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan, Tareenka Xawaaraha Sare ayaa bixiyay macluumaadka ku saabsan shaqada. Wasiirka Turhan, wadooyinka imtixaanka ee loo yaqaan 'YHT', illaa iyo qayb ka mid ah wadida imtixaanka ayaa bilaabmi doonta Maarso, ayuu yidhi. Wasiirka Turhan ayaa yidhi, 393 Waxaanu higsanaynaa inaanu bilowno tijaabooyinka tijaabooyinka bilaha Maarso-Maarso 2020 oo ah khadka tareenka xawaare sare ee Ankara-Sivas ee Bişeyh - Yerköy - Akdağmadeni iyo inaan dhameystirno mashruuca rubucii labaad ee XNUMX Bakan.
Wasiirka Turhan wuxuu sheegay inay dhiseen khadad tareen xawaare sare leh oo ku habboon 200 kiiloomitir oo saacadaha xamuulka iyo rakaabka lagu qaadi karo wadooyin tareen xawaare sare leh wuxuuna intaas raaciyay, “Xaaladda guud ahaan, Bursa-Bilecik, Sivas-Erzincan, Konya-Karaman-Ulukışla-Yenice-Mersin-Adana, Adana- Osmaniye-Gaziantep, wadar dhan 626 kiiloomitir oo tareeno xawaare sare leh iyo 429 kiiloomitir oo howlaha dhismaha tareenka ee caadiga ah ayaa wali socda. Waxaan u dhaqaaqi doonaa maaraynta xawaaraha xawaaraha dhamaadka bisha May annaga oo dhameystirayna 423-kiiloomitir Konya-Karaman qeybta mashruuca tareenka xawaaraha sare ee 102-Konya-Karaman-Mersin-Adana, taasoo awood u siineysa in xamuul laga qaado Konya, Karaman iyo Kayseri loona wareejiyo Mersin Port. Marka laga soo tago mashaariicdayada socota, sahan iyo daraasado mashruuc ayaa lagu dhammeeyey kun 491 kiiloomitir. 6 kun iyo 434 kiiloomitir oo hawsha diyaarinta mashruuca ah ayaa wali socda. Sidaas darteed, waxaan sii wadaynaa dhismaha, qandaraaska iyo mashruuca sahanka-wadarta ah ee wadar ahaan ah 13 kun 21 kiiloomitir oo khadka tareenka ah. ”
Taariikhda furitaanka Ankara-Istanbul YHT
TCDD Ankara (Polatlı) - Mashruuca Konya YHT 7 wadooyinka oo laga gudbo et
Furitaanka xarun tareenka xawaaraha sare ee Ankara (Video)
Wadada Tijaabada ee Khadka Ankara-Sivas YHT